केपी–माधव मिल्दा बादललाई धोका ! – hamrosandesh.com
केपी–माधव मिल्दा बादललाई धोका !
नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व समाधानको दिशातर्फ अघि बढ्दा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ वा डा. खिमलाल देवकोटामध्ये एकजनाले धोका पाउने निश्चित थियो । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले अन्ततः बादलले नै धोका पाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई बलियो तुल्याएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा बादल र देवकोटा यस्ता उम्मेदवार हुन्, जो एउटै पार्टीका दुई अलग समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । बादल नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् भने डा. देवकोटालाई एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले उम्मेदवार बनाएको हो । देवकोटालाई काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले समेत समर्थन जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म एमालेभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका पाँच–पाँच सदस्यसहितको कार्यदल बनाइएको छ ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवाद समाधानउन्मुख रहेको नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै बताइरहेका छन् ।